Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Muddo intee le’eg ah ayey Dowladda Federaalku isku halayn kartaa ciidamada shisheeye ?‏
Muddo intee le’eg ah ayey Dowladda Federaalku isku halayn kartaa ciidamada shisheeye ?‏
Ciidamada Shisheeye ee ku sugan dalkeena Soomaaliya ee ku howlgala magaca Amisom, Ayaa dhawaanahan bilaabay in ay dib uga soo gurtaan goobo badan oo ay horay uga qabsadeen Xarakada Al-shabab, ka dib markii ay ciidamadaasi la kulmeen weeraro ba’an oo qasaaro badan u geystay, Kuwaasi oo kuwii ugu darnaa ay ka dhaceen deegaanada Leego iyo Janaale, oo dhamaantood ku wada tirsan gobolka Shabeela Hoose ee u muhiimka ah.
Sidan kor ku soo xusnayba, ciidamadan Afrikanka, ayaa bilaabay in ay isaga soo baxaan magaalooyin iyo deegaanno muhiim ah oo ay dhib badan ka mareen qabsashadooda, kuwaasi oo ku kala yaallo gobolo ay ka mid yihii Gedo, Baay, Bakool, Sh/ Hoose, Hiiraan iyo waliba gobolka Galgaduud. Waxaana u danbeeyey deegaanada laga soo baxay deegaanka Janaale, ee uu dhawaan ka dhacay mid ka mid ah dagaaladii ugu qasaaraha badnaa ee lagu qaado ciidamada Amisom tan iyo markii ay Soomaaliya yimaadeen.
Ciidamadan Afrikanka ah, ayaa sameynayo dib-ugarashooyin aan horay loo sii shaacin, Kuwaasi oo runtii jahawareer badan ku abuuray maamulada ka jira deegaanada ay ciidamadu ka howlgalaan sida Sh/ Hoose oo kale, Kuwaasi oo ka warhela marka un meel laga soo baxo, Taas oo runtii noqotay wax lala yaabo. Tusaale ahaan, waxa ay ahayd haddiiba cid un la wargelin karo in la wargeliyo Maamulka Gobolka, si markaasi loo qaato talaabo lagu daadgureynayo dadka taageersan Maamulkaasi.
Falalka ay ku kacayaan ciidamadan, ayaa waxa uu runtii qatar gelinayaa nolosha dad badan oo jaal la’ah Dowladda Federaalka, Kuwaasi oo ku sugan deegaanada laga soo baxayo. Hadaba mudda intee le’eg ah ayey Dowladda Federaalku isku sii halayn kartaa ciidamadan shisheeye ? Anigu, waxa ay ila tahay runtii inaysan Dowladdu mudda dheer iyo mid gaabanba midna isku sii halayn Karin Ciidamadan sababa badan oo jira awgood, Kuwaasi oo aan dib ka sheegi doono.
Anigu, shaqsiyan waxaan qabaa inaysan Dowladdu isku sii halayn Karin ciidamadan Afrikanka ah maxaa yeelay, waa marka hore waa ciidamo shisheeye oo ka yimid dal kale, Kuwaaasi oo bixi kara waqtiga ay doonaan. Waa marka labaade, waxaa imaan karo duruufo soo dadajiya bixintaankooda sida kuwa dhaqaale, kuwa amni iyo waliba kuwa siyaasadeed. Kuwaasi oo hadii ay dhacaan xaalka u badali kara mid aan la saadaalin Karin, sida meelo badanba ka dhacday.
Laakiin waxaa jira laba arimood oo haddii ay dhacaan uu xaalku isbadalayo , Waan dhaqaalaha iyo amniga. Tusaale ahaan, hadii dhaqaalo la waayo, wey adag tahay in ay Ciidamadan dalka sii joogaan iskaba daaye in ay guulo soo hoyaane. Sidee u shaqeyn karaa askari shisheeye oo waliba Afrikaanka ah, Kaasi oo aan qaadan wax mushaar ah, Iyadoo waliba ay dushiisa ka dhacayso rasaas kulul oo ka imaaneysa Islaamiyiin ay raqiis la tahay geerida, hadana aysan waqti ku soconin ?
Sidee u dagaalami karaa askari baahan, oo waliba uu sugayo qoys u baahan dhaqaalo uu ku maareeyo noloshiisa, Mase jiraa qof kuugu shaqeynayo bilaasha ? Anigu, kolay ilama ahan iney taasi dhacayso, balse waxaa laga yaaba in ay sidaasi aaminsan yihiin siyaasiyiinteena. Waxaa dhawaan soo baxday warbixin sheegeysa inaysan ciidamadani qaadan wax mushaar ah sagaalkii bilood ee la soo dhaafay, Taas oo haddii ay dhab noqoto keeni karta in ay dalkaba isaga baxaan, Iyaga oo aan ku guuleysan hadafkoodii waaba hadii ay awoodaane.
Dhaqaalo la’aanta la sheegayo ee haysata Ciidamadan, ayaad modda in ay sabab u tahay dagaalada meel walba ka holcayo, ee lagula jiro kooxahan Islaamiyiinta ah. Kuwaasi oo aad mooddo in ay furamo badan ku fureen dhinacyada ay iska soo horjeedaan ee ay hormuudka u yihiin dalalka reer Galbeedka, iyo waliba dowladaha jaalka la’ah. Bal fiiriya inta goobood ee maanta lagu hardamayo oo hadana u baahan dhaqalo iyo ciidamo xoogan. ka bilow Afganistaan, Ciraaq, Suuriya, Yaman, Liibiya, Maali, Naayjeeriya iyo waliba kuwa kale oo badan.
Furamahan, ayaa u kala muhiimsan dalalka bixiya dhaqaaalaha lagula dagaalamayo Kooxaha Islaamiyiinta ah. Tusaale ahaan, Waxaan dhowr tobodaad ka hor ka dhageystay Idaacadda BBC-da, gaar ahaan laanteeda Af-Soomaliya warbixin sheegaysay in Faransiisku uu soo jeediyey in loo weeciyo dhaqaalaha lagu taageero Amisom dhanka Galbeedka Afrika, halkaasi oo ay dagaalo ka wadaan Kooxo Islaamiyiin ah oo ay ka mid tahay Kooxda Boko Xaraam.
Faransiiska, ayaad mooddaa in uu leeyahay waxaan dano ka leeyahay Galbeedka Afrika, ee ha isku tashteena Soomaali iyo wixii daneeya arimaheeda. Waxaa sidaasi oo kale, Iyagana ay furamo dagaal ku furan yihiin dalalka Carabta, gaar ahaan kuwa Khaliijka iyo waliba iyo dowladda Turkiga, Kuwaasi oo dagaal adagi kaga jira dalka Yeman, ka dib markii ay halkaasi qabsadeen kooxo Shiica ah oo ay dabada ka riixeyso dowladda Iiraan ee cadowga ah.
Hadaan u nimanno dhanka amniga. Ciidamadani, waa ay bixi karaan haddii uu sii kordho qasaaraha soo gaarayo askartooda. Tusaale ahaan, maxaa dhacayo haddii ay sii bataan weerarada ay dhiigga badani ku daadanayaan ee lagu qaadayo xarumahooda ? Amaba ay sii socdaan cadaadisyada lagu hayo Ciidamada si ay isubalaariyaan, si markaasi loo soo afjaro dagaaladan lagala soo horjeedo Xarakadan Islaamiga ah ? Jawaabtu way iska caddahay laakiin dhibka jiraa waxaa weeye inaanba xaqiiqda la rabin.
Tusaale kale, hadda marka aad u fiirsato sida ay wax u socdaan, waxaa runtii kuu soo baxayso in ay ciidamadu haysato labo daran mid dooro.Tusaale ahaan, haddii ay isbalaariyaan waxaa yaraanayo awooddooda, Taasna waxa ay Shabaabka siineysaa inay siday rabaan u gumaadaaan sida marar badanba dhacday. Haddii ay is-uruuriyaana, waxaa ku dheeraanayo dagaalka, waana sidii ay Shabaabku rabeenoo waxa ay sii haysanayaan dhulkii ay awalba haysteen.
Mixnaddan dagaal ee Amisom haysato, Ayaa waxaa u sii dheer is khilaafka ka dhexjira gudaha kooxahan ay hormuudka u tahay Dowladda Federaalka, Kuwaasi oo iyagii shaqo iska dhigtay halkii ay wax qaban lahaayeen. Bal fiiriya, waxa maanta ka dhex taagan wax-mahaysatadan aan is-difaaci Karin. Maxay sameynayaan haddii ay Amisom saakadan baxdo ? Ma idinla tahay in ay sii haysan karaan goobaha ay hadda ku sugan yihiin sida Kismaayo oo kale ? Abadan.
Dhanka siyaasadda haddii aan wax ka tilmaanno. Ciidamadan, waxa ay dalka u joogaan gaar ahaan kuwa ka socda dalalka Itoobiya iyo Kenya arimo siyaasadeed oo Iyaga u gaar ah. Haddii ay waayaanna waa ay bixi karaa waqtiga ay doonaan, Iyaga oo aanan cidna u sheegin sidii kalhoraba dhacday. Imisa jeer ayey ciidamada Itoobiya isaga soo baxeen deegaanno ay qabsadeen, Iyaga oo aanan cidna la socodsiinin, Yaase kula xisaabtamay falalkaasi ? No one (cidna)
Arimahan aan soo sheegnay oo dhan iyo kuwa kale oo lagu darayba, Waxa ay dhamantood keeni karaan in ay ciidamadan iska baxaan, Iyagoo aan cidna la tashan. Yaa ku qasbi kara maanta ciidamada Itoobiya iyo Kenya in ay Soomaaliya sii joogaan hortase ma u yimaadeen in ay Soomaaliya hagaagto, oo ay ka dhalato dowlad hanan karta dalka oo dhan ? jawaabtu waa maya, maxaa yeelay labadooda midna doonimaayo in ay Soomaaliya ka dhalato dowlad xoogan, balse waxaan taasi fahmeynin ninka la yiraahdo siyaasi (jaajuus).
Hadaan soo sheegnay inaan la isku halayn Karin ciidamadan shisheeye, oo ay bixi karaan watiga ay dooonaan hadaba maxaa xal ah ? Anigu, Waxa ay ila tahay runtii in Dowladda Soomaaliya looga baahan yahay in ay la timaaddo qorshayaal looga maarmi karo ku-tiirsanaanta ciidamadan. Qorshoyaashaasi oo uu ugu horeeyo dib-u-heshiisiin dhab ah, oo lala galo cid kasta oo Soomaali ah oo wax tabaneysa sida Xarakada Al-shabab oo kale.
Waa in ay qorshayashaasi noqdaan kuwa hadaba la bilaaba inta aysan imaanin waxyaabo aanan hadda loo fadhinin. Waan ku celinayaa mar kale, waa in ay Dowladda Federaalku la timaaddaa qorshayaal looga maarmi karo ku-tiirsanaanta ciidamadan Afrikaanka, oo u dhaqmayo sida ciidamo calooshooda-ushaqeystayaal oo kale. Kuwaasi oo aad mooddo in ay ku jiraan ganacsi heer sare ah. Marka shirar la sheego waa la dhaqdhaqaayaa. Marka kalena waa la seexanayaa !
Gaba gabadii iyo gunaanudkii hadaan mar kale isweydiino mudda intee le’eg ayey Dowladda Federaalk isku sii halayn kartaa ku-tiirsanaanta ciidamadan Shisheeye ? Jawaabtu waxa aan leenahay ma badna inta la isku halayn karo ciidamadan, maxaa yeelay waa marka hore waa ciidamo shisheeye oo bixi kara waqti kasta. Waa marka labaade, waa ciidamo u yimid danahooda sida kuwa Kenya iyo Itoobiya oo kale. Waa marka sedexaade, waxaa ku imaan kara duruufo dhaqaale oo ku qasbi kara in ay iska baxaan, Iyaga oo aanan cidna la tashan.
Akhiiran, waxaan leeyahay Soomaaliya waxa ay u baahan tahay waa xal siyaasadeed ee ma’ahan xal caskari, waayo horaan u soo tijaabinay xoog iyo in shisheeye la isu isticmaalo, weyna shaqeyn weysay taasi. Hadaba sow ceeb naguma ahan inaan maalin kasta tijaabinno wax aan shaqeynaynin, Anagoo waliba sheeganeyno inaannahay dad muslimiin ah oo waliba maskax furan. Yaa ii sheegi kara goorta uu dhamaan doono dagaalkan sokeeye ?
W/Q: Cabdulaahi Ibrahim Gumeysi-diid
Daawo Muqaal Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Oo Dib Ugu Laabtay Magaalada Baydhabo
Dhageyso Xildhibaan Prof. Dhalxa “Maamulka Shariif Xasan Doorkii Uu Ku Lahaa Gobolka Sh/hoose Kama Muuqdo Marba Cid Ayaa Iska Maamulata”